Sharciyan dowlada federalka ma iibin kartaa mise kireyn kartaa dhul hanti qaran ah? | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Warkii Sharciyan dowlada federalka ma iibin kartaa mise kireyn kartaa dhul hanti qaran...
Sharciyan dowlada federalka ma iibin kartaa mise kireyn kartaa dhul hanti qaran ah?
Muqdisho (Warkii.com) – Tan iyo markii ay banaanka u soo baxday in shirkad gaar ah laga kireeyay dhul kamid ah Tiyaatarka Qaranka, si looga dhiso maqaayad ayaa waxaa ka dhashay hadal hayn xoogan oo ku aadan awooda dowladda ee bixinta hanti-qaran.
Dadka sharciyan aqoonta u leh arrintaan ayaa sheegaya in markii laga hadlo lahaanshiyaha dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya, lagana eego dhanka sharciga ay dowladdu leedahay dhulka halka khayraadka dhulka iyo kan baddana ay yihiin hanti Qaran oo ka dhaxeeysa dadweynaha (hanti dadweyne).
Qodobka 42-aad ee Dastuurka ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya farqadiisa 1-aad ayaa dhigaysa “in khayraadka badda iyo kan bariga labaduba yihiin hanti dadweyne”, sida uu Wasiirkii hore ee howlaha guud, Eng Saadiq Cabdullaahi u sheegay BBC-da.
Eng Saadiq ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladdu “ay iibin karto wixii dhul dowladeed ah loona arko dan qaran oo waliba ay ka iibin karto shirkad ama shaqsi”, balse loo baahan yahay keliya in dowladda u marto nidaamka sharciga ah, ayada oo la waafajinayo xeerarka dalka uga yaalla arrintan.
“Marka hore soo jeedinta arrintaan waxaa iska leh guddiga qaran ee wakiilka uga ah dowladda dhexe, waxaa sidoo kale qayb arrintaan ku leh golaha deegaanka dhulku ku yaalla markaa kadibna waa in la raadiyaa si loogu tartamo oo cidii ku guulaysata ay sidaa ku hesho,” ayuu yiri.
“Dakhliga ka soo baxa dhulkaas iibkiisa waa inuu si toos ah ugu xarooda qasnadda dowladda oo aanu ku dhicin gacan wasaarad gaar ah iyo shaqsi gaar ah.”
Dhinaca kale, Xafiiska Hantidhawrka Guud ee Qaranka ayaa soo bandhigay 5 qoddob oo Wasaaradda Warfaafinta ka dul booday markii la bixinayay qeyb kamid ah dhulka Tiyaatarka, islamarkaana ka hor-imaneysa wareegtada lagu bixiyey dhulkaas, kuwaasi oo kala ahaa;
Qodobka 1aad ee warqada Hantidhawraha Guud ee 20/10/2020 oo lagu sheegay in hay’adah Dowladda heshiisyada ay galaan ka soo diiwan geliyaan Xafiiska Hantidhawrka Guud ee Qaranka.
Wuxuu Hantidhawrku meel adag iska taagay bixinta dhulka danta guud ee loo marayo sifo sharciga waafaqsaneyn, ayadoona hay’addaha iyo mas’uuliyiinta dowladda looga digay in hantida umadda u maamulaan si gaar ah, kana faa’iideystaan xilliyada kala guurka.
Previous articleDeg Deg Afduubkii Loogu Aarayay Dilka Ikraan Tahliil oo Sii Xoogeystay 04/09/2021
Next articleMadaxweyne Cali Guudlaawe oo qiil yaab leh u sameeyay dib u dhaca maamulkiisa
Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi oo soo saaray liiska Musharaxiinta Aqalka Sare
CALI YARE CALI oo si la yaab leh uga hadlay imaanshaha Fahad Yaasiin ee Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyey isku day afgambi oo ka dhacay dalka Suudaan
Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi oo soo saaray liiska Musharaxiinta Aqalka...